"Umxholo" Igumbi Lokumkanikazi, Indlu Ephambili, iCasa del Alma - I-Airbnb
"Umxholo" Igumbi Lokumkanikazi, Indlu Ephambili, iCasa del Alma
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSunne
I-Casa del Alma okanye i-Soul House intle kwaye ipholile. Ikwindlela ethe cwaka kufutshane nomgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya embindini we-El Valle, inekhitshi elinento yonke, iigadi ezivulekileyo, ipuli yokuqubha kunye nendawo yokoja. Iigawuni zokuhlamba, iitawuli zokuhlamba kunye neetawuli zepuli ziyafumaneka, kunye nomatshini wokomisa iinwele, ishampu, i-conditioner kunye nomzimba wemvelo kunye nesepha yezandla. Ekhitshini, ikofu, iti, iswekile, izihluzi zekofu, ioyile yomnquma, ityuwa nepepile ziyafumaneka.
Eli ligumbi lokulala elikhulu elinebhedi yexeshana negumbi lokuhlambela labucala. Iofisi encinci/igumbi lokunxitywa liqukiwe kweli gumbi. Eli gumbi likwindlu ephambili, ngoko indawo yokuhlala, yokutyela nekhitshi zisetyenziswa nangabanye abantu.
Uxolo kwaye uzolile. Indawo esembindini ekufutshane nombindi we-El Valle de Anton (umgama wokuhamba), kwindlela engadlulanga kwindlela eya e-El Nispero (iZoo.) Umbindi wedolophu ubonisa imarike enkulu yangaphandle ngeempelaveki. Ukuhamba intaba nokubukela iintaka zizinto ezithandwayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sunne
Ndihlala kwisakhiwo esahlukileyo kule ndawo. Ndikunika lonke ubumfihlo obunqwenelayo, kodwa ndikwisiza, ukuba ufuna naluphi na uncedo.